Sir la Helay: Daawo muuqaal Mobile nuuciisa aad la yaabi doonto oo lasoo wado guurmuuse soo baxayaa? | Hoyga Barbaarta Somalistars
Home » Arimaha Bulshada » Sir la Helay: Daawo muuqaal Mobile nuuciisa aad la yaabi doonto oo lasoo wado guurmuuse soo baxayaa?
Sir la Helay: Daawo muuqaal Mobile nuuciisa aad la yaabi doonto oo lasoo wado guurmuuse soo baxayaa?
Waxaa Qoray: admin /////////// Taariikh: 22-07-16 11:50 AM Shirkada laga leeyahay dalka Mareykan ee Polytron faraceeda Taiwan ayey u suurtagashay in 6 sanadood oo baaris ah kadib ay soo saarto Telefoonkii ugu horeeyey ee dhalo kaliya laga sameeyey. Mobile kan cusub ayaa leh sifo ka duwan sifooyinkii lagu yaaqanay Telefoonada caadiga isaga oo laga dhex arkayo wax waliba oo la dhigo gadaashiisa ama shey yada ka dambeeyo oo idil.
Polytron ayaanan weli suuqa si rasmi ah usoo dhigin farsamadeeda cusub, waxaase la helay sawirka Mobile ka leh dhamaan sifooyinka iPhone 5 ka, waxa uuna culeyska Mobile kan cusub uu ka hooseeyaa culeys yada lagu yaqaano Telefoonada gacanta 25%, Sidoo kale dhirirka Mobile kan cusub ayaa gaarayo 4.3 Inch.
Ugu dambeyn waxaa xusid mudan in Shirkada Polytron oo ah shirkad aan saameyn weyn ku laheyn suuqyada Telefoonada ay dooneysa iney suuqa si xowli ah ugu soo gasho Mobile ka marka la gaaro dhamaadka sanadka aynu ku jirna ee 2016 ka, balse waxaa weli la kala cadeyn qiimaha rasmiga ah ee uu Mobile kan cusub kusoo galayo suuqyada caalamka oo ay qabsadeen shirkadaha SamSung, iPhone, Sony iyo Lenovo.